रक्सीको के दोस ! - Sadrishya
रक्सीको के दोस !
‘दोस रक्सीको होइन,’ मलाई रणभुल्लमा पार्दै उ भन्दै थियो । अझ रमाइलो कुरा त के भने उ रक्सीमा मातेको अवस्थामा नै रक्सीलाई दोसमुक्त सावित गर्ने प्रयास गर्दै थियो । उसको अनुसार दोस उसको प्रेमको रे ! त्यो पनि आफ्नी श्रीमती प्रतिको उसको प्रेमको !
टोनी हो उसको नाम । लगभग ४५–५० वर्षको । सानो कदको दुब्लो पातलो । सपिङ मलमा उ नियमित आइ रहन्थ्यो । कुनै न कुनै स्टोरमा वसेर कुरा गर्दै समय काट्थ्यो । त्यही क्रममा एक दिन मेरो स्टोरमा पनि आएको थियो अनी त्यसपछि त्यो लगभग नियमित क्रम हुन पुगेको थियो ।
प्राय जसो उ रक्सीमा मातेको अवस्थामा हुने गथ्र्यो । कहिलेकाही त ढलमलाउदो अवस्थामा समेत देखिएको थियो उ । त्यही भएर सपिङ मलका सुरक्षा कर्मचारीहरूले उसलाई मातेको अवस्थामा मल भित्र नआउन पटक पटक चेतावनी दिइ सकेका थिए । अनी आखिर केही सिप नलागेपछि एक दिन सपिङ मलले आफ्नो नियम अनुसार उसलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न पूर्ण प्रतिवन्ध लगाएको थियो । तर उसँगको माथिको संवाद भने त्यो प्रतिबन्ध लाग्नु पूर्वको हो, मल भित्रै भएको ।
कुरा के भने एक पटक उ एक्कासी हराएको थियो । पहिलो दुई चार दिन त कसैले मेसो पाएन । तर लगभग साता दिनपछि भने एक जनाले मसँग उ केही दिन देखि नदेखिएको बारे जिज्ञासा राखेको थियो । मैले पनि त्यतिञ्जेल ख्याल गरेको रहेन छु । मलाई पनि उत्सुकता जागेर आयो । त्यसपछि हामी वरीपरिका छ सात वटा स्टोरमा काम गर्नेहरूवीच उसका बारेमा कुरा भयो, तर उ कहाँ गएको थियो र किन एक्कासी आउन छाड्यो कसैले ठोकुवाकासाथ भन्न सकेन । उसँग आफ्नो कार पनि थिएन त्यसैले कुनै अन्य सहर गएको होला भन्ने तर्फ हामीले सोचेनौ, त्यसमाथि उसको कोही नातेदार भएको पनि हामी कसैलाई थाहा थिएन । नत उसले नै आफ्नो नातेदारका बारेमा केही उल्लेख गरेको थियो ।
एक दुई दिनसम्म उसका वारेमा जिज्ञासा आदान प्रदान भएपछि हामी सबै फेरी आआफ्नो काम तिर व्यस्त भएका थियौँ । हो, उसलाई शारिरिक रुपमा केही अप्ठेरो नभएको कामना भने हामी सबैले गरेका थियौँ ।
उ अचानक हराएको लगभग महिना दिनपछि हो, विहान म आफ्नो स्टोर खोल्ने तरखरमा लागि रहेको बेला कसैले पछाडीबाट मेरो काँधमा हात राख्यो । मैले फनक्क घुमेर हेरेँ, हो, उही थियो । मुसुक्क हास्दै ‘के छ हाल खबर’ भनेर सोध्यो ।
मैले उसको जवाफ दिनभन्दा पनि यतिका दिन कहाँ थियौ, के भएको थियो, किन नदेखिएको स्वास्थ त ठिकै छ नी, जस्ता प्रश्न एकपछि अर्को सोध्न थालेको थिए ।
उ अझ पनि आफ्नो चिरपचिरित मुस्कानमै थियो । ससाना कपाल, नपिएको अवस्थतामा पनि लट्ठ परेको आँखालाई ढाकेको पावरको चश्मा, नाक मुन्तिर मसिनो परेको कैलो जुँगा अनी पातला ओँठ ।
‘के गर्नु म त जेल परेको थिए नी !’ उसको कुराले म आश्चार्यमा परे ।
मैले थप केही जिज्ञासा राख्नु पूर्व नै उसले भन्यो–त्यस्तै एक दिन वेलुका सडकमा हिड्दै थिए प्रहरीले समाएर लग्यो । त्यसपछि ठिक एक महिना थुनामा परेँ ।
वेलुका हिड्दा हिड्दै प्रहरीले किन समायो भन्ने मेरो प्रश्नको जवाफमा उसले फेरी मुसुक्क हाँस्दै भन्यो–मातेर हिडेको हुनाले नी ! त्यसको सजाय स्वरुप एक महिना थुनामा परेँ ।
आफू हिजो मात्र थुना मुक्त भएको बताउदै उसले अगाडि भन्यो–अव भने पुग्यो मलाई । अब रक्सी पिएपछि म सकेसम्म घर वाहिर निस्कन्न ।
तर के गर्नु आफ्नो एक्लोपन मेटाउन रक्सी पिउछु । अनी मात्न थालेपछि एक्लोपनले झन सताउन थाल्छ र वाहिर निस्कन्छु । तर अस्तीको पटक भने प्रहरीको फेला परे ।
अनी विहे किन नगरेको नी भन्ने प्रश्नलाई उसले यस पटक पनि टाल्न खोजेको थियो । तर मैले अली कर गरेपछि भन्यो–मेरो जीवनमा एउटी महिला आएकी थिइन मेरी श्रीमतीका रुपमा, उनले छाडेर गएपछि त्यो स्थान कसैले भर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन ।
मैले थप जिज्ञासा राखेपछि उसले भन्यो । जस अनुसार उसले युवा अवस्था देखि आफूले मन पराएको युवतीलाई विहे गरेको रहेछ । दुवैवीच सम्बन्ध पनि राम्रै थियो रे । उ पनि कारको म्याकेनिक । राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो । लोग्ने स्वास्नीले मन फुकाएर खर्च गर्दा पनि नसकिने ।
तर एक दिन उ कामबाट फर्केर आउदा श्रीमती घरमा थिइनन् ।
‘श्रीमती मात्र किन कुनै सामान पनि घरमा थिएन ।’ उसले हास्दै भन्यो–एउटा चम्चा पनि नछाडेर लगिछ । के गर्ने त्यस वेलुका रेस्टुरेन्टमा गएर भोक मेटाएको थिए ।
उसले श्रीमतीले किन त्यसो गरी उ कता गइ त्यस वारेमा कुनै चाँसो पनि राखेन रे ।
‘तर हो, उसलाई विर्सन पनि सकेको छैन अहिलेसम्म । र म उसँग रिसाएको पनि छैन । खाली एउटा जिज्ञासा मात्र छ की उसले किन यस्तो गरी ? हामीबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । मैले निकै मायाँ गरेर राखेको थिए उसलाई, अनी उसको व्यवहारबाट मैले कहिल्यै पनि यसो गर्ली भन्ने संकेत पाइन । तर खै के भयो भयो ।
त्यसको केही समयपछि हो उमाथि सपिङमलमा आउन प्रतिबन्ध लागेको । त्यसपछि उसँग भेट हुने कुनै माध्यम पनि रहेन ।
तर अचानक आज भेटिएको थियो उ । ग्रोसरी पसलमा । एकै छिनको हाइ, हेल्लोपछि मैले उसलाई उसको स्वास्थको वारेमा सोधेको थिए । उसले आफ्नो मिर्गौलामा समस्या भएको बताएको थियो ।
‘त्यसो भए रक्सी छाड्यौ होला नी होइन ?’ मेरो प्रश्नको जवाफमा उसले मुस्कुराउदै भन्यो–डाक्टरले पूरै छाडीहाल्न भनेको छैन । त्यसैले अली अली पिँउछु ।
दोस रक्सीको मात्र होइन के ।